Cirrurka | Saadaasha Shabakadda
Waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah daruuraha dhaadheer heer sare, cirro ama cirro. Waxay yihiin daruuro gaar ah oo qaab fiilooyin jilicsan oo jilicsan ah, ama cidhiidhi ah, cadaan ah ama bangiyo cad cad ku dhowaad ama kooxo. Daruurahaani waxay leeyihiin muuqaal jilicsan, oo la mid ah timaha qofka, ama dhalaal dhalaalaya ama labada astaamood isku mar.
Waxay ka kooban yihiin wax yaryar kiristaalo baraf ah, maadaama ay ku samaysan yihiin meel aad u dheer (8-12Km.). Heerarkan heerkulku wuxuu u dhexeeyaa -40º ilaa -60ºC, sidaa darteedna hawo badan, oo leh uumibo biyo badan oo loo qaboojiyey dhereg ahaan, waxay soo saartaa kiristaalo baraf ah halkii ay ka ahaan lahayd dhibco biyo. Samaysiga daruuraha noocan ah waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in kristantarradan oo ay wataan dabaylaha xoogga badani, ee ka sarreeya heerarka sare, ay sameysmayaan astaamo u gaar ah oo ay ka muuqdaan cirka. Waa inaad ka taxaddartaa inaadan ku khaldin iyaga iyo 'Cirrostratus'. Kuwa dambe had iyo jeer waxay soo saaraan dhacdo halo ah.
Marka laga hadlayo xaaladda cimilada ee ay la xiriiraan, waxaa la dhihi karaa markay u muuqdaan kuwo go'doon ah waxay astaan ​​u yihiin cimilada wanaagsan, laakiin haddii ay horay u sii socdaan abaabul iyo si tartiib tartiib ah ugu sii fidaya dhinaca sare (sida sawirka) waxay muujinayaan inay soo dhowdahay waqtiga badala, xoogaa hore ama xamaasad. U gudubta dabaysha waxay tilmaamaysaa durdur diyaarad oo dherer ah.
Waxaan ku siin doonnaa talooyin kooban haddii ay dhacdo in akhristaha kasta uu doonayo inuu sawiro daruurta noocan ah. Waa inaad ogaataa inay ku bixiyaan iftiintooda ugu fiican xagal 90º ah qorraxda. Isticmaal miiraha kala-baxa si loo muujiyo caddaanka Cirrus iyo mugdiga cirka. Ku dar tixraacyada dhulka. Qorrax dhaca, falaadhaha qorraxda ee ka hooseeya cirku waxay sameeyaan, kala shaandheyn, Cirrus wuxuu marka hore noqdaa huruud, ka dibna liin, ka dibna casaan, casaan, si uu u dhammaado inuu cirro noqdo. Amarkan ayaa dhab ahaan ka soo horjeeda qorrax ka soo baxa.
Wareegtada Cirrus way ku kala duwan yihiin 4 nooc (Fibratus, Uncinus, Spissatus iyo Floccus) iyo 4 nooc (Intortus, Radiatus, Vertebratus iyo Duplicatus).
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Cirruuska
iyo haddii ay ku samaysmaan qaabab baraf ah ... maxay u dhici weydaa? barafku wuu culus yahay
Ku jawaab asdassda
RUBEN DARIO GALINDEZ PEDREROS dijo
Cali, Janaayo 11, 2016, waxaa jiray daruur cirrus ah
Ku jawaab RUBEN DARIO GALINDEZ PEDREROS
Uumiga, qaboojinta iyo sublimation